2018 - Khit Minnyo
Hacking Knowledge December 21, 2018
By KhitMinnyo on December 21, 2018 No comments:
ဆောင်းပါး December 06, 2018
By KhitMinnyo on December 06, 2018 No comments:
Computer Basic November 18, 2018
Computer Basic Free Course (မြန်မာလို) Chapter4- Microsoft Office Excel
View all Videos ..................
By KhitMinnyo on November 18, 20183comments:
Computer Basic November 16, 2018
By KhitMinnyo on November 16, 2018 No comments:
Hacking Techniques September 30, 2018
By KhitMinnyo on September 30, 20183comments:
Labels: Articles, Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Techniques
Hacking with Android September 18, 2018
Termux ဆိုတာကို အလှယျဆုံး ပွောရရငျ Linux command တှကေို Android မှာ သုံးလို့ရအောငျ ကူညီပေးထားတဲ့ Application တဈမြိုးလို့ မှတျယူနိုငျပါတယျ
ပိုပွီး Powerful ဖွဈစဖေို့အတှကျ အတူတှဲသုံးရမယျ့ Application အစုံလိုကျလညျး ရှိပါသေးတယျ။
အထကျပါအတိုငျး ဖွဈပါတယျ။ အားလုံးကို Install လုပျပွီး သုံးမယျဆိုရငျ ပိုပွီး ပွညျ့စုံကောငျးမှနျသှားပါတယျ။
လာပွီဗြာ။ ပွဿ နာ
ဘယျကနေ install ရမလဲပေါ့။
Google PlayStore မှာ ရှာလိုကျရငျ Termux နဲ့ Termux API နှဈခု အခမဲ့ ရပါတယျ။
VPN ကြျောပွီးရှာမှ ကနျြတာတှတှေမှေ့ာဖွဈပွီး Free မရပါ။
ဝယျယူသုံးဖို့ အဆငျပွသေူတှကေတော့ မူလ Termux App တှကေို Google Playstore ကနေ တရားဝငျ ဝယျယူသုံးသငျ့ပါတယျ။ ဈေးလညျးမမြားပါဘူး။
PlayStore ကနေ ဝယျဖို့ အခကျအခဲရှိသူတှအေတှကျတော့ မူရငျး Apk တှကေို Backup ထုတျပွီး တငျပေးထားတဲ့ App ၇ ခုကို ယူသုံးနိုငျပါတယျ။
အောကျပါ Link မှာ အားလုံး တှရေ့ပါမယျ။
ဒေါငျးရအဆငျပွအေောငျ Folder အလိုကျ တငျပေးလိုကျပါတယျ။
မိမိတို့မှာ ရှိပွီးသားကို ထပျဆှဲစရာမလိုပါ။
မရှိသေးတဲ့ apk ကိုပဲ ဆှဲယူသုံးပါ။
Termux & Termux Float
Install မယျဆိုရငျတော့ တရားဝငျယူထားတာမဟုတျတဲ့အတှကျ အငျတာနကျလေး ပိတျပွီးမှ install ပါ။ အားလုံးပွီးသှားရငျ အငျတာနကျ ပွနျဖှငျ့နိုငျပါတယျ။
ခုနဈခုတောငျ install လိုကျတာဖွဈပမေယျ့လို့ ကြှနျတျောတို့ တကယျတမျး ကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ အောကျပါပုံအတိုငျး
Termux, Termux boot နဲ့ Termux Float သုံးခုပဲ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ကနျြတာတှကေ Main Termux Program ထဲကို ရောကျသှားမှာပါ။
ကနျြတာတှကေိုပါ မွငျခငျြရငျတော့ Zapya ထဲကနေ အလှယျတကူ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Termux အားလုံးကို Install ပွီးသှားပွီဆိုပါတော့။ အဓိက သုံးရမှာနှဈခု ရှိပါတယျ။
Termux နဲ့ Termux Float ပါ။
Termux နဲ့ Termux Float နှဈခုလုံး ဖှငျ့ထားတဲ့ ပုံစံပါ။ အဆငျပွပွေေ တှဲသုံးနိုငျမယျ့ Keyboard က Hacker's Keyboard ပါ။
Hacker's Keyboard ကို PlayStore ကနေ ဒေါငျးယူလို့ရပါတယျ။ PlayStore မရှိသူမြား အောကျပါ Link ကနေ ဒေါငျးယူနိုငျပါတယျ။
Install ပွီးသှားတဲ့အခါမှာ Termux မှာ ပထမဆုံး လုပျရမှာက pkg update ပါ။
Upgrade လုပျစရာတှေ ရှိရငျ Yes (or) No မေးပါလိမျ့မယျ။ y လို့ရိုကျထညျ့ပွီး Enter လိုကျရုံပါပဲ။
100% install ပွီးသှားတဲ့အခါ package အားလုံး upgrade ဖွဈသှားပါပွီ။
လိုအပျတာတှအေခြို့ကို pkg install (or) apt-get install နဲ့ install နိုငျပါတယျ။
ဥပမာ - Network Scanner တဈခုဖွဈတဲ့ nmap ကို install မယျဆိုပါစို့။
အောကျပါပုံအတိုငျး install နိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
pkg install nmap ပေါ့။
ကြှနျတေျာ့မှာတော့ install ပွီးသားမို့ ဒီလိုပဲ မွငျရတာပါ။ မိတျဆှတေို့ဆီမှာ install ပွီးသားမရှိသေးတဲ့ Package တှကေို install တဲ့အခါ
Yes (or) No မေးတတျပါသေးတယျ။ y ရိုကျထညျ့ပွီး enter လိုကျရုံပါပဲ။
nmap install ပွီးပွီဆိုရငျ nmap နဲ့ scanning စ လုပျနိုငျပါပွီ။
ဥပမာ - nmap -sV ip/range ပေါ့။
ဒီလောကျဆို သဘောပေါကျနားလညျနိုငျကွမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျဗြ
ခု Article လေးကို ဒီမှာပဲ ရပျနားပါရစေ
နောကျထပျ Article တဈခုမှာ ဒီအကွောငျး ဆကျပွီး ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈလို့ www.khitminnyo.com ကို မကွာခဏ လာရောကျလညျပတျပွီး Android နဲ့ဆိုငျတဲ့ Menu မှာ ရှေးခယျြလလေ့ာနိုငျပါကွောငျးခငျဗြာ
Termux ဆိုတာကို အလွယ်ဆုံး ပြောရရင် Linux command တွေကို Android မှာ သုံးလို့ရအောင် ကူညီပေးထားတဲ့ Application တစ်မျိုးလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်
ပိုပြီး Powerful ဖြစ်စေဖို့အတွက် အတူတွဲသုံးရမယ့် Application အစုံလိုက်လည်း ရှိပါသေးတယ်။
အထက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို Install လုပ်ပြီး သုံးမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး ပြည့်စုံကောင်းမွန်သွားပါတယ်။
လာပြီဗျာ။ ပြဿ နာ
ဘယ်ကနေ install ရမလဲပေါ့။
Google PlayStore မှာ ရှာလိုက်ရင် Termux နဲ့ Termux API နှစ်ခု အခမဲ့ ရပါတယ်။
VPN ကျော်ပြီးရှာမှ ကျန်တာတွေတွေ့မှာဖြစ်ပြီး Free မရပါ။
ဝယ်ယူသုံးဖို့ အဆင်ပြေသူတွေကတော့ မူလ Termux App တွေကို Google Playstore ကနေ တရားဝင် ဝယ်ယူသုံးသင့်ပါတယ်။ ဈေးလည်းမများပါဘူး။
PlayStore ကနေ ဝယ်ဖို့ အခက်အခဲရှိသူတွေအတွက်တော့ မူရင်း Apk တွေကို Backup ထုတ်ပြီး တင်ပေးထားတဲ့ App ၇ ခုကို ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါ Link မှာ အားလုံး တွေ့ရပါမယ်။
ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Folder အလိုက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိတို့မှာ ရှိပြီးသားကို ထပ်ဆွဲစရာမလိုပါ။
မရှိသေးတဲ့ apk ကိုပဲ ဆွဲယူသုံးပါ။
Install မယ်ဆိုရင်တော့ တရားဝင်ယူထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် အင်တာနက်လေး ပိတ်ပြီးမှ install ပါ။ အားလုံးပြီးသွားရင် အင်တာနက် ပြန်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ခုနစ်ခုတောင် install လိုက်တာဖြစ်ပေမယ့်လို့ ကျွန်တော်တို့ တကယ်တမ်း ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း
Termux, Termux boot နဲ့ Termux Float သုံးခုပဲ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကျန်တာတွေက Main Termux Program ထဲကို ရောက်သွားမှာပါ။
ကျန်တာတွေကိုပါ မြင်ချင်ရင်တော့ Zapya ထဲကနေ အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Termux အားလုံးကို Install ပြီးသွားပြီဆိုပါတော့။ အဓိက သုံးရမှာနှစ်ခု ရှိပါတယ်။
Termux နဲ့ Termux Float ပါ။
Termux နဲ့ Termux Float နှစ်ခုလုံး ဖွင့်ထားတဲ့ ပုံစံပါ။ အဆင်ပြေပြေ တွဲသုံးနိုင်မယ့် Keyboard က Hacker's Keyboard ပါ။
Hacker's Keyboard ကို PlayStore ကနေ ဒေါင်းယူလို့ရပါတယ်။ PlayStore မရှိသူများ အောက်ပါ Link ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Install ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Termux မှာ ပထမဆုံး လုပ်ရမှာက pkg update ပါ။
Upgrade လုပ်စရာတွေ ရှိရင် Yes (or) No မေးပါလိမ့်မယ်။ y လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter လိုက်ရုံပါပဲ။
100% install ပြီးသွားတဲ့အခါ package အားလုံး upgrade ဖြစ်သွားပါပြီ။
လိုအပ်တာတွေအချို့ကို pkg install (or) apt-get install နဲ့ install နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - Network Scanner တစ်ခုဖြစ်တဲ့ nmap ကို install မယ်ဆိုပါစို့။
အောက်ပါပုံအတိုင်း install နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
pkg install nmap ပေါ့။
ကျွန်တော့်မှာတော့ install ပြီးသားမို့ ဒီလိုပဲ မြင်ရတာပါ။ မိတ်ဆွေတို့ဆီမှာ install ပြီးသားမရှိသေးတဲ့ Package တွေကို install တဲ့အခါ
Yes (or) No မေးတတ်ပါသေးတယ်။ y ရိုက်ထည့်ပြီး enter လိုက်ရုံပါပဲ။
nmap install ပြီးပြီဆိုရင် nmap နဲ့ scanning စ လုပ်နိုင်ပါပြီ။
ဥပမာ - nmap -sV ip/range ပေါ့။
ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ
ခု Article လေးကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားပါရစေ
နောက်ထပ် Article တစ်ခုမှာ ဒီအကြောင်း ဆက်ပြီး ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ www.khitminnyo.com ကို မကြာခဏ လာရောက်လည်ပတ်ပြီး Android နဲ့ဆိုင်တဲ့ Menu မှာ ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်းခင်ဗျာ
By KhitMinnyo on September 18, 2018 8 comments:
Kali September 13, 2018
1. Install KDE Plasma Network Manager
root@kmn:~# apt install plasma-nm -y
2. Go to settings. Now, you can see Connection tab in network setting.
Now, you can connect your Wireless network
By KhitMinnyo on September 13, 2018 No comments:
Q & A September 10, 2018
1. Download Windows iso. For legal & secure, Download from this link.
Dwonload Windows 7, 8 & 10 from Microsoft
2. Change Directory to Downloads.
You can see Win10_1803_English_x64.iso file in my Downloads Directory.
3. Insert your formatted USB to your computer. Use "fdisk -l" to view your USB.
root@kmn:~/Downloads# fdisk -l
Disk identifier: 0x13b2a96a
/dev/sda5 1953904640 3907028991 1953124352 931.3G 83 Linux
/dev/sda6 528123904 1953904639 1425780736 679.9G 83 Linux
/dev/sda7 520310784 528121855 7811072 3.7G 83 Linux
/dev/sda8 488284160 520308735 32024576 15.3G 82 Linux swap / Solari
Disk identifier: 0x002292d4
You can see My USB Device the last line of above picture. My USB is " /dev/sdb1 ". It may vary in your system. Use your Device.
## This is my downloaded iso. Copy the name (or) type carefully the following command.
root@kmn:~/Downloads# dd bs=4M if=Win10_1803_English_x64.iso of=/dev/sdb1
A moment later, it is already to use.
By KhitMinnyo on September 10, 2018 No comments:
ဆောင်းပါး September 08, 2018
ဒီရကျတှထေဲမှာ အမြားဆုံး ကွုံတှရေ့တဲ့ ပွဿ နာ တဈခုပါ။ အရိုးသားဆုံး ဝနျခံရရငျ Game ပဲစိတျစှဲပွီး ဂိမျးတဈခုပဲ အာရုံရှိကွသူတှနေဲ့ ကြှနျတျော အစေးမကပျပါဘူး။ အပငျြးပွေ ဂိမျးတှကေို ကြှနျတျော ကစားဖူးပါတယျ။ အခြိနျတိုငျးကစားနဖေို့တော့ စိတျမကူးပါ။ ဂိမျးကစားခွငျးမှာ မမှလြေ့ျောတဲ့သူ ဖွဈတာကွောငျ့ ထငျပါတယျ။ ဘယျဂိမျးကမှ ကြှနျတေျာ့ကို စှဲမကျစခေဲ့ခွငျးမရှိပါ။ ကစားတယျ။ လုံးဝမကစားတာမဟုတျ။ ဒါပမေယျ့ အပြျောပဲ။ ခဏလေးကစားလိုကျတယျ။ ပွီးရငျ ပငျြးသှားရောပဲ။ ဂိမျးကစားကွသူအမြားစုသညျ ဂိမျးတဈခုတညျးမှာတငျ လမျးဆုံးသှားကွတာမြားပါတယျ။ ဒီလိုပွောလို့ ပရျောဖကျရှငျနယျ ဂိမျးသမားတှကေို မဆိုလိုပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲလို ပရို တှကေ အရမျးနညျးပါတယျ။ အခြိနျတှအေမြားကွီး ဂိမျးမှာသုံးကွတယျ။ ပွီးတော့ လလေ့ာသငျယူမှု အားနညျးသှားကွတယျ။ မိသားစု အပေါငျးအသငျးတှကွေားမှာ ဂိမျးလောကျ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုကျနိုငျကွတော့လို့ လူမှုရေးတှေ ဆုံးရှုံးကွတယျ။ ဂိမျးကစားတာ မကောငျးဟု ကြှနျတျောမပွောလိုပါ။ စကားပဲ ကစားနပွေီး ကိုယျ့အတှကျ တနျဖိုးရှိတဲ့အရာတှေ ဆုံးရှုံးနဈနာနရေပွီဆိုရငျတော့ တကယျကို ဆိုးသှားပါပွီ။
ခေါငျးစဉျနဲ့ မညီပဲနမေယျ။ ခေါငျးစဉျအတိုငျး ဆှေးနှေးကွစို့။
Game Hack ခငျြတယျ လို့ ကြှနျတျောတို့ အလှယျပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။ တကယျတမျး hack လား လို့မေးရငျ "ဘာကွောငျတာလဲ" ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ပွနျဆကျဆံကွတာကို ကွုံနကွေရပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့တှေ ကှနျပြူတာ တှေ သုံးကွပါတယျ။ အမြားဆုံး သုံးလရှေိ့တဲ့ Operating System က Windows ပါ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာ အမြားဆုံးသုံးကွတဲ့ Windows တှရေဲ့ ရာနှုနျးအမြားဆုံးက Pirate Version လို့ချေါကွတဲ့ Cracked (crack ထားပွီးသား) Version တှပေါ။
ထို့အတူ ကြှနျတျောတို့ အမြားဆုံး အသုံးပွုကွတဲ့ Microsoft Office (word, excel, Powerpoint, publisher, access, ...) ပေါ့။ ဒါတှကေိုလညျး တရားဝငျ ဝယျယူသုံးကွတာမဟုတျဘဲ Crack (လိုငျစငျမတောငျးအောငျ ပွုပွငျ) ပွီး ပေးထားတာတှကေိုသာ သုံးနကွေခွငျးဖွဈပါတယျ။
Application တှရေဲ့ License ကို ခဖြေကျြနိုငျဖို့ ကွိုးစားတာ Cracking ပညာရပျ လို့ ယဘေုယြ ပွောလိုက ပွောနိုငျပါတယျ။ ဒါတငျမကသေးပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့တှေ ဂိမျးကစားကွတယျ။ ဥပမာ Plants Vs Zombies2(game) ဆိုပါစို့။ ပုံမှာကွညျ့ပါ။
လိုအပျတာတှေ ပိုပိုပွီးဝယျယူနိုငျဖို့ စိနျတှေ ရှတှေေ (Golds & Diamonds) လိုအပျလာပါတယျ။ ဒါတှကေို မဝယျယူခငျြရငျတော့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ အကွပျအတညျးကွုံရမယျ့ level တှမှော ရှဆေ့ကျနိုငျဖို့ မလှယျတဲ့အထိ အခကျတှရေ့တော့မှာပါပဲ။ ဝယျဖို့ကတြော့ မွနျမာတှနေဲ့က နညျးနညျးအလှမျးဝေးပါတယျ။ ဖုနျးဘလေို အလှယျတကူဖွညျ့ဝယျလို့ မရသလို ဈေးလညျးမြားတာကိုး။ အဲသညျတော့ ဂိမျးဟကျမယျဆိုပွီး လှယျလှယျလေး တှေးလိုကျကွတော့တာပါပဲ။ အဲမှာ စ တှတေ့ယျ ပွောရမှာပဲ။ Hacking တှတေဲ့နရောတိုငျး Page တိုငျးမှာ "How to hack ...... Game" တှေ လြှောကျမေးကုနျကွတော့တာပေါ့လေ။ "How to hack PUBG game" ဆိုပွီး တှသေ့မြှ နိုငျငံတကာ Page တှမှောကအစ လိုကျမေးကွတာ အမြားကွီးတှလေ့ာကွရပါတော့တယျ။
ဂိမျးတှထေဲမှာ ၂ မြိုးခှဲ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
အငျတာနကျလိုတဲ့ အှနျလိုငျးဂိမျးနဲ့ အငျတာနကျမလိုတဲ့ offline game ဆိုပွီးတော့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ Offline Game တှကေတော့ ဂိမျးကိုရော ဂိမျးရဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုပါ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စကျထဲမှာပဲ သိမျးပါတယျ။ ဖုနျးထဲက ဂိမျးဆို ဖုနျးထဲမှာ သိမျးတယျပေါ့။ အဲလိုသိမျးတဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့ လကျရှိရောကျနတေဲ့ level, ကြှနျတျောတို့ ကစားထားတဲ့ ရမှတျ (gold, gem, diamond) စတာတှကေို ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဖုနျးထဲမှာပဲ ထညျ့သိမျးထားတာဖွဈလို့ Game Hacker ဘာညာဆိုတဲ့ Tool တှကေို သုံးပွီး Data တှရေဲ့ လကျရှိနံပါတျ (ဥပမာ Gold 100 ပဲရှိရငျ 100 ) ကို ရှာပွီး အစားထိုးလို့ရတဲ့ အမွငျ့ဆုံးကိနျး (Maximum Amount) ထိ အစားထိုးပွငျဆငျပွီး ပွနျကစားတဲ့အခါ လိုခငျြတဲ့ လကျနကျကိရိယာအစုံ လိုသလောကျဝယျလို့ ရသှားတာကွောငျ့ ဂိမျးကစားရတာ ရှုံးပှဲမရှိတော့ပါဘူး။ (နိုငျခငျြလို့ ကစားတဲ့သူက မြားတာကိုး။ ရှုံးရတာကို ဘယျသူမှ မကွိုကျကွဘူးလေ 😁😁) ဒါတောငျမှ အခြို့ဂိမျးတှရေဲ့ ဒတောကို Crack ဖို့ဆို root လိုသေးတာကွောငျ့ root မဖောကျထားတဲ့ ဖုနျးတှမှော ပွဿ နာ တကျပွနျရော။
ဂိမျးအခကျြအလကျတှကေို Crack (ခရကျ) ဖို့လို့ ကြှနျတျော ပွောခဲ့တယျနျော။ ဒါဆိုဘာလို့ Game Hacker ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ App တှရှေိနတောလဲလို့ ပွနျမေးခငျြမေးကွပါလိမျ့မယျ။ အဓိကကတော့ App တှထေဲက ဒတောကို ခိုးယူတာမို့ Hack (ခိုး = hack) ဆိုတဲ့ လှဲမှားမှုကွီးကနေ စတာပါ။ ဟုတျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာတငျမဟုတျ ကမ်ဘာနဲ့အဝှနျးမှာတောငျမှ crack ကို သိတဲ့သူ နညျးတာကိုး။ Cracker ဆိုရငျ အဲသညျ Tool ကို လူတှကေ မသုံးကွတော့ဘူး။ Game Hacker ဆိုတဲ့ နာမညျသာ ပါလို့ကတော့ သုံးလို့ရသညျဖွဈစေ မရသညျဖွဈစေ တှတေ့ာနဲ့ ဒေါငျးပွီး စမျးကွတော့တာကိုး။
ဒီလိုပဲ Game hack ပွတယျဆိုတဲ့ (edit လုပျထားတဲ့) ဗီဒီယိုအတုတှကေလညျး Youtube မှာ ပေါပေါလောလော နရောယူနတောကွောငျ့ ဒါတှကေိုလိုကျကွညျ့ပွီး တကယျထငျမှတျ လိုကျလုပျနကွေ လုပျမရ သူ့ကရြပွီး ငါ့ကဘြာလို့မရလဲတှေ ဖွဈကုနျကွတော့တာပါပဲလေ။
လိုရငျးပြောကျမှာစိုးလို့ ပွနျဆကျရအောငျ။ ဂိမျး (app) တှထေဲက အခကျြအလကျထုတျယူပွငျဆငျတာကို Crack တယျလို့ ချေါတယျဆိုတဲ့အကွောငျး ကြှနျတျော ပွောပွခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ဖုနျးထဲမှာ ဒတောသိမျးတဲ့ Offline Game တှထေဲက Gem တှေ၊ Gold တှေ၊ Diamond တှကေို ရယူခွငျးကို Offline Game Cracking လို့ ချေါရမှာပေါ့။
ဒါဆို အှနျလိုငျးဂိမျးတှကေိုရော ဘယျလို Crack ကွမလဲ။ (hack လို့ မသုံးဘူးနျော)
Online Game ဆိုတဲ့နရောမှာလညျး အရာရာတိုငျးကို Server မှာ သိမျးတဲ့ ဂိမျးနဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ဖုနျးမှာပဲသိမျးပွီး update ကိုသာ Server ကနေ ပေးတဲ့ ဂိမျးမြိုးဆိုပွီး ရှိပါတယျ။ အှနျလိုငျးဂိမျးတှအေကွောငျး အသေးစိတျကို Wikipedia
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Online_game မှာ ဖတျရှုကွညျ့နိုငျပါတယျ။
ဒီဘကျခတျေ အှနျလိုငျးဂိမျးတှကေတော့ program ကိုသာ ဖုနျးထဲမှာထားပွီး user info တှနေဲ့ user ရဲ့ ကစားထားတဲ့ Level တှေ၊ ရရှိထားတဲ့ gold, gem, diamond စတာစတာတှကေိုတော့ သူတို့ရဲ့ server မှာသာ သိမျးထားပါတယျ။
Offline Game အခြို့ကို Crack ခငျြရငျတော့ Hack App Data Pro (apk) for android only ကိုသုံးပွီးတော့ Crack နိုငျပါတယျ။ root လိုတဲ့ ဂိမျးလညျးရှိသလို root မလိုဘဲ crack လို့ရတာလညျး ရှိပါတယျ။
အထကျပါ link ကနေ သှားရောကျဒေါငျးယူနိုငျပါတယျ။
Online Game ရော Offline Game တှရေောအတှကျ မိမိဘာသာ Crack ခငျြရငျ တူညီတာတဈခုက Cracking ပညာရပျ ကို တတျမွောကျကြှမျးကငျြထားရမှာဖွဈပါတယျ။
Android OS အကွောငျး၊ Layers တှအေကွောငျး၊ Environment တှအေကွောငျး၊ , xml ဖိုငျအကွောငျး၊ meta-inf, mainfest.mf စတဲ့စတဲ့ဖိုငျတှအေကွောငျး သိဖို့လိုပါမယျ။
Apktool နဲ့ Basksmail တှသေုံးပွီး code တှကေို disassemble လုပျတာတှေ၊ စတဲ့စတဲ့ Cracking ဆိုငျရာ ပညာရပျတှကေို နှံ့စပျကြှမျးကငျြနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။
ဒါတငျမကသေးပါဘူး။ Online Game တှဟော သူတို့ရဲ့ Data တှကေို Server မှာ သိမျပွီး လုံခွုံမှုရှိစဖေို့လညျး ဖနျတီးထားသေးတာမို့ Plants Vs Zombies2လို၊ COC လို Game မြိုးတှမှော Server လမျးကွောငျးကို ဖွတျတောကျပွီး Server အသဈနဲ့ ပွုပွငျပွောငျးလဲလိုကျရတာမြိုးလညျး ရှိနနေိုငျပါတယျ။ နားရှုပျမှာစိုးလို့ ဒီလောကျပဲ ပွောပါရစေ။ အကယျ၍ ဂိမျးဆာဗာက Vulnerable Server ဖွဈနရေငျတော့ Hacking နဲ့ Reverse Engineering ကို ပေါငျးစပျပွီး ဝငျရောကျပွုပွငျနိုငျပါသေးတယျ။
ဒီ Apk, ဒီ Link ကနေ ဝငျရငျ gem တှေ ဘယျလောကျရမျာဆိုပွီး ဂိမျးကစားထားတဲ့ ဒတောတှေ၊ လယျဗယျတှမြေားနတေဲ့ Acc တှကေို ထောငျဖမျးတာမြိုးတှကေိုလညျး Game Hacking လို့ ဆိုခငျြဆိုနိုငျပါတယျ။ 😁
နိဂုံးခြုပျလေးပွောရရငျ Cracking ကို Reverse Engineering လို့ ချေါကွပါသေးတယျ။ Cracking အကွောငျးကို မွနျမာလို ရှငျးပွထားတဲ့ pdf file (Two Version) ကို အောကျပါ Link တှေ ကနေ သှားရောကျဒေါငျးယူနိုငျပါတယျ။
Cracker လမျးညှနျ Volume 1 Download
Cracker လမျးညှနျ Volume2Download
‌09-420786010, 09-970323455 မှာ
ဘယျမွို့ကိုမဆို အိမျအရောကျ ပို့ပေးပါလိမျ့မယျ
ဒီလောကျဆို သဘောပေါကျနားလညျနိုငျကွမယျလို့ ယူဆပါတယျဗြာ
ဒီရက်တွေထဲမှာ အများဆုံး ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿ နာ တစ်ခုပါ။ အရိုးသားဆုံး ဝန်ခံရရင် Game ပဲစိတ်စွဲပြီး ဂိမ်းတစ်ခုပဲ အာရုံရှိကြသူတွေနဲ့ ကျွန်တော် အစေးမကပ်ပါဘူး။ အပျင်းပြေ ဂိမ်းတွေကို ကျွန်တော် ကစားဖူးပါတယ်။ အချိန်တိုင်းကစားနေဖို့တော့ စိတ်မကူးပါ။ ဂိမ်းကစားခြင်းမှာ မမွေ့လျော်တဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် ထင်ပါတယ်။ ဘယ်ဂိမ်းကမှ ကျွန်တော့်ကို စွဲမက်စေခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ကစားတယ်။ လုံးဝမကစားတာမဟုတ်။ ဒါပေမယ့် အပျော်ပဲ။ ခဏလေးကစားလိုက်တယ်။ ပြီးရင် ပျင်းသွားရောပဲ။ ဂိမ်းကစားကြသူအများစုသည် ဂိမ်းတစ်ခုတည်းမှာတင် လမ်းဆုံးသွားကြတာများပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဂိမ်းသမားတွေကို မဆိုလိုပါ။ ဒါပေမယ့် အဲလို ပရို တွေက အရမ်းနည်းပါတယ်။ အချိန်တွေအများကြီး ဂိမ်းမှာသုံးကြတယ်။ ပြီးတော့ လေ့လာသင်ယူမှု အားနည်းသွားကြတယ်။ မိသားစု အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာ ဂိမ်းလောက် ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်နိုင်ကြတော့လို့ လူမှုရေးတွေ ဆုံးရှုံးကြတယ်။ ဂိမ်းကစားတာ မကောင်းဟု ကျွန်တော်မပြောလိုပါ။ စကားပဲ ကစားနေပြီး ကိုယ့်အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာနေရပြီဆိုရင်တော့ တကယ်ကို ဆိုးသွားပါပြီ။
ခေါင်းစဉ်နဲ့ မညီပဲနေမယ်။ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း ဆွေးနွေးကြစို့။
Game Hack ချင်တယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ အလွယ်ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း hack လား လို့မေးရင် "ဘာကြောင်တာလဲ" ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ပြန်ဆက်ဆံကြတာကို ကြုံနေကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ ကွန်ပျူတာ တွေ သုံးကြပါတယ်။ အများဆုံး သုံးလေ့ရှိတဲ့ Operating System က Windows ပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အများဆုံးသုံးကြတဲ့ Windows တွေရဲ့ ရာနှုန်းအများဆုံးက Pirate Version လို့ခေါ်ကြတဲ့ Cracked (crack ထားပြီးသား) Version တွေပါ။
ထို့အတူ ကျွန်တော်တို့ အများဆုံး အသုံးပြုကြတဲ့ Microsoft Office (word, excel, Powerpoint, publisher, access, ...) ပေါ့။ ဒါတွေကိုလည်း တရားဝင် ဝယ်ယူသုံးကြတာမဟုတ်ဘဲ Crack (လိုင်စင်မတောင်းအောင် ပြုပြင်) ပြီး ပေးထားတာတွေကိုသာ သုံးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Application တွေရဲ့ License ကို ချေဖျက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာ Cracking ပညာရပ် လို့ ယေဘုယျ ပြောလိုက ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့တွေ ဂိမ်းကစားကြတယ်။ ဥပမာ Plants Vs Zombies2(game) ဆိုပါစို့။ ပုံမှာကြည့်ပါ။
လိုအပ်တာတွေ ပိုပိုပြီးဝယ်ယူနိုင်ဖို့ စိန်တွေ ရွှေတွေ (Golds & Diamonds) လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါတွေကို မဝယ်ယူချင်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အကြပ်အတည်းကြုံရမယ့် level တွေမှာ ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ မလွယ်တဲ့အထိ အခက်တွေ့ရတော့မှာပါပဲ။ ဝယ်ဖို့ကျတော့ မြန်မာတွေနဲ့က နည်းနည်းအလှမ်းဝေးပါတယ်။ ဖုန်းဘေလို အလွယ်တကူဖြည့်ဝယ်လို့ မရသလို ဈေးလည်းများတာကိုး။ အဲသည်တော့ ဂိမ်းဟက်မယ်ဆိုပြီး လွယ်လွယ်လေး တွေးလိုက်ကြတော့တာပါပဲ။ အဲမှာ စ တွေ့တယ် ပြောရမှာပဲ။ Hacking တွေ့တဲ့နေရာတိုင်း Page တိုင်းမှာ "How to hack ...... Game" တွေ လျှောက်မေးကုန်ကြတော့တာပေါ့လေ။ "How to hack PUBG game" ဆိုပြီး တွေ့သမျှ နိုင်ငံတကာ Page တွေမှာကအစ လိုက်မေးကြတာ အများကြီးတွေ့လာကြရပါတော့တယ်။
ဂိမ်းတွေထဲမှာ ၂ မျိုးခွဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
အင်တာနက်လိုတဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်းနဲ့ အင်တာနက်မလိုတဲ့ offline game ဆိုပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Offline Game တွေကတော့ ဂိမ်းကိုရော ဂိမ်းရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်ထဲမှာပဲ သိမ်းပါတယ်။ ဖုန်းထဲက ဂိမ်းဆို ဖုန်းထဲမှာ သိမ်းတယ်ပေါ့။ အဲလိုသိမ်းတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိရောက်နေတဲ့ level, ကျွန်တော်တို့ ကစားထားတဲ့ ရမှတ် (gold, gem, diamond) စတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာပဲ ထည့်သိမ်းထားတာဖြစ်လို့ Game Hacker ဘာညာဆိုတဲ့ Tool တွေကို သုံးပြီး Data တွေရဲ့ လက်ရှိနံပါတ် (ဥပမာ Gold 100 ပဲရှိရင် 100 ) ကို ရှာပြီး အစားထိုးလို့ရတဲ့ အမြင့်ဆုံးကိန်း (Maximum Amount) ထိ အစားထိုးပြင်ဆင်ပြီး ပြန်ကစားတဲ့အခါ လိုချင်တဲ့ လက်နက်ကိရိယာအစုံ လိုသလောက်ဝယ်လို့ ရသွားတာကြောင့် ဂိမ်းကစားရတာ ရှုံးပွဲမရှိတော့ပါဘူး။ (နိုင်ချင်လို့ ကစားတဲ့သူက များတာကိုး။ ရှုံးရတာကို ဘယ်သူမှ မကြိုက်ကြဘူးလေ 😁😁) ဒါတောင်မှ အချို့ဂိမ်းတွေရဲ့ ဒေတာကို Crack ဖို့ဆို root လိုသေးတာကြောင့် root မဖောက်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ ပြဿ နာ တက်ပြန်ရော။
ဂိမ်းအချက်အလက်တွေကို Crack (ခရက်) ဖို့လို့ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တယ်နော်။ ဒါဆိုဘာလို့ Game Hacker ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ App တွေရှိနေတာလဲလို့ ပြန်မေးချင်မေးကြပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ App တွေထဲက ဒေတာကို ခိုးယူတာမို့ Hack (ခိုး = hack) ဆိုတဲ့ လွဲမှားမှုကြီးကနေ စတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတင်မဟုတ် ကမ္ဘာနဲ့အဝှန်းမှာတောင်မှ crack ကို သိတဲ့သူ နည်းတာကိုး။ Cracker ဆိုရင် အဲသည် Tool ကို လူတွေက မသုံးကြတော့ဘူး။ Game Hacker ဆိုတဲ့ နာမည်သာ ပါလို့ကတော့ သုံးလို့ရသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ တွေ့တာနဲ့ ဒေါင်းပြီး စမ်းကြတော့တာကိုး။
ဒီလိုပဲ Game hack ပြတယ်ဆိုတဲ့ (edit လုပ်ထားတဲ့) ဗီဒီယိုအတုတွေကလည်း Youtube မှာ ပေါပေါလောလော နေရာယူနေတာကြောင့် ဒါတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီး တကယ်ထင်မှတ် လိုက်လုပ်နေကြ လုပ်မရ သူ့ကျရပြီး ငါ့ကျဘာလို့မရလဲတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပါပဲလေ။
လိုရင်းပျောက်မှာစိုးလို့ ပြန်ဆက်ရအောင်။ ဂိမ်း (app) တွေထဲက အချက်အလက်ထုတ်ယူပြင်ဆင်တာကို Crack တယ်လို့ ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော် ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ ဒေတာသိမ်းတဲ့ Offline Game တွေထဲက Gem တွေ၊ Gold တွေ၊ Diamond တွေကို ရယူခြင်းကို Offline Game Cracking လို့ ခေါ်ရမှာပေါ့။
ဒါဆို အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကိုရော ဘယ်လို Crack ကြမလဲ။ (hack လို့ မသုံးဘူးနော်)
Online Game ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း အရာရာတိုင်းကို Server မှာ သိမ်းတဲ့ ဂိမ်းနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖုန်းမှာပဲသိမ်းပြီး update ကိုသာ Server ကနေ ပေးတဲ့ ဂိမ်းမျိုးဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေအကြောင်း အသေးစိတ်ကို Wikipedia
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Online_game မှာ ဖတ်ရှုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဘက်ခေတ် အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကတော့ program ကိုသာ ဖုန်းထဲမှာထားပြီး user info တွေနဲ့ user ရဲ့ ကစားထားတဲ့ Level တွေ၊ ရရှိထားတဲ့ gold, gem, diamond စတာစတာတွေကိုတော့ သူတို့ရဲ့ server မှာသာ သိမ်းထားပါတယ်။
Offline Game အချို့ကို Crack ချင်ရင်တော့ Hack App Data Pro (apk) for android only ကိုသုံးပြီးတော့ Crack နိုင်ပါတယ်။ root လိုတဲ့ ဂိမ်းလည်းရှိသလို root မလိုဘဲ crack လို့ရတာလည်း ရှိပါတယ်။
အထက်ပါ link ကနေ သွားရောက်ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Online Game ရော Offline Game တွေရောအတွက် မိမိဘာသာ Crack ချင်ရင် တူညီတာတစ်ခုက Cracking ပညာရပ် ကို တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Android OS အကြောင်း၊ Layers တွေအကြောင်း၊ Environment တွေအကြောင်း၊ , xml ဖိုင်အကြောင်း၊ meta-inf, mainfest.mf စတဲ့စတဲ့ဖိုင်တွေအကြောင်း သိဖို့လိုပါမယ်။
Apktool နဲ့ Basksmail တွေသုံးပြီး code တွေကို disassemble လုပ်တာတွေ၊ စတဲ့စတဲ့ Cracking ဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွေကို နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ Online Game တွေဟာ သူတို့ရဲ့ Data တွေကို Server မှာ သိမ်ပြီး လုံခြုံမှုရှိစေဖို့လည်း ဖန်တီးထားသေးတာမို့ Plants Vs Zombies2လို၊ COC လို Game မျိုးတွေမှာ Server လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ပြီး Server အသစ်နဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ရတာမျိုးလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ နားရှုပ်မှာစိုးလို့ ဒီလောက်ပဲ ပြောပါရစေ။ အကယ်၍ ဂိမ်းဆာဗာက Vulnerable Server ဖြစ်နေရင်တော့ Hacking နဲ့ Reverse Engineering ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဝင်ရောက်ပြုပြင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီ Apk, ဒီ Link ကနေ ဝင်ရင် gem တွေ ဘယ်လောက်ရမ်ာဆိုပြီး ဂိမ်းကစားထားတဲ့ ဒေတာတွေ၊ လယ်ဗယ်တွေများနေတဲ့ Acc တွေကို ထောင်ဖမ်းတာမျိုးတွေကိုလည်း Game Hacking လို့ ဆိုချင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ 😁
နိဂုံးချုပ်လေးပြောရရင် Cracking ကို Reverse Engineering လို့ ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ Cracking အကြောင်းကို မြန်မာလို ရှင်းပြထားတဲ့ pdf file (Two Version) ကို အောက်ပါ Link တွေ ကနေ သွားရောက်ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Cracker လမ်းညွှန် Volume 1 Download
Cracker လမ်းညွှန် Volume2Download
‌09-420786010, 09-970323455 မှာ
ဘယ်မြို့ကိုမဆို အိမ်အရောက် ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်
ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ကြမယ်လို့ ယူဆပါတယ်ဗျာ
By KhitMinnyo on September 08, 20186comments:
Labels: Articles, ဆောင်းပါး